Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukadzi ane makore 24 nevana vaviri uye ndiri pachokwadi nekuda kutanga imba . . . | Kwayedza
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukadzi ane makore 24 nevana vaviri uye ndiri pachokwadi nekuda kutanga imba . . .
12 Aug, 2016 - 00:08	 2016-08-11T08:32:25+00:00 2016-08-12T00:00:19+00:00 0 Views
NDIRI murume ane makore 27 ndinotsvagawo mukadzi ane makore 27 zvichidzika ane twunhu twake kana akava nevana hapana chakaipa. Ngaave ane chido nemurume. Zvakawanda tozotaura, andida ngaandibate pa0776 551 966.
Ndine makore 38 nemwana mumwe chete, ndinodawo mukadzi ane makore ari pasi peangu. Ndinoita basa remawoko uye handisi pachirongwa. Anoda nhare yangu 0777 890 736.
Ndiri murume ane makore 50, ndinotsvagawo mukadzi ane makore 38 – 46 ari pamushonga. Ndinoda akanaka. Andifarira ngaandibate pa0733 371 160 asi handidi vanoda zvekutamba.
Makadini weKwayedza? Ndiri murume ane makore 34 nemwana mumwe chete, ndinotsvagawo mukadzi ane mwana kana asina ane makore 23 zvichienda mberi. Ndinoita basa remawoko, ave kuda zvemba ngaandibate pa0774 586 667.
Makadii veKwayedza? Ndinotenda ndakamuwana wandaida saka chiregedzai kundishambadza. Vaindifonera pa0783 044 316 ngavachirega havo nekuti wangu ndave naye.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 24, ndinotsvagawo musikana ane makore 22 kusvika 19 wekuroora. Ndinogara muHarare, vanoda ndibatei pa0784 528 197.
Makadini henyu veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 32 nevana 4 uye ndinotsvagawo murume ane makore 45 kusvika 50. Ndinobatika pa0777 105 432.
Makadii? Ndiri murume ane makore 37, HIV positive nemwana mumwe uye ndinodawo mukadzi wekuroora. Andifarira ngaafone pa0773 189 499.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore 27 ndinotsvagawo mukadzi ari pachokwadi wekuroora akavimbika. Anoda nezvangu ngaandibate pa0714 285 369.
Ndiri kutsvagawo musikana ane makore 20 zvichidzika, ndiri mukomana ane makore 21. Nhare yangu 0776 784 455.
Pamusoroi veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 23 ndinoda musikana akanaka asina chirwere anoda zverudo chete. Asi ngaave anogara muHarare, akasimba zviri pakati nepakati uye anoratidzikawo pane vamwe. Kana pane andifarira ndibate pa0776 242 073.
Ndiri mukomana ane makore 22, ndinotsvakawo musikana ane makore 18-21 anoda zvekuvaka musha. Anoda ngaandibate pa0775 478 235.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri murume ane makore 38, HIV positive uye ndinotsvagawo mudzimai anoda zvemusha. Kunyanya vekuMash West neMash Central. Ane makore 30 zvichidzika anondibata pa0777 224 204.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 23, ndinotsvagawo musikana ari pachokwadi wekufambidzana naye ane makore 18-22. Ngaandibate pa0785 747 687.
Ndiri mukomana ane makore 23 ndinotsvakawo shamwari yechisikana yakarongeka. Anoda zverudo ari pasi pemakore 21 ngaandibate pa0778 961 908.
Ndiri mukomana ane makore 26, ndinotsvagawo musikana/mukadzi ane makore 18-25 wekushamwaridzana naye. Handina chirwere, anoda ngaandibate pa0783 393 717.
Ndiri mukomana ane 22, ndinodawo musikana ane makore 18 kusvika 20 wekuroora. Nhare yangu 0771 116 526.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 28 nevana 4, handisi pamushonga uye ndinotsvagawo murume wokushamwaridzana naye. Andida anondibata pa0783 156 062.
Makadiniko vabiki vechino chirongwa? Chokwadi ndingafare zvikuru mukabuditsawo shambadzo yangu mubepanhau. Ndakambonyorera asi hapana wandakawana vose vandaitaura navo matsotsi ega-ega.
Vamwe vacho varume vane misha yavo vaindifonera. Ini ndiri kuda asina mukadzi ari pachokwadi nezveimba.
Ndiri mukadzi ane makore 34, ndinogara muHarare uye ndinoita basa remawoko. Vana ndine 2, kuwana adawo nezvangu ngatitaure pa0771 782 230. Ndatenda hangu.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukadzi ane makore 24 nevana vaviri uye ndiri pachokwadi nekuda kutanga imba. Ndiri mugari wekuNyanga, vanoda ndibatei pa0714 405 966.
Makadii henyu? Ndiri murume ane makore 38 nevana vaviri, ndinotsvagawo mukadzi ane makore 26 zvichidzika. Kava kechitatu ndichingonyorera kuchirongwa chino asi handisati ndamboburitsawo shambadzo yangu. Vanoda ndibatei pa0773 005 994.
Makadii veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 45 nevana vaviri, ndinotsvagawo murume ane makore 40 kusvika 50 asina mukadzi. Nhare yangu 0783 394 277.
Tinotenda nechirongwa chakanaka, vachiri kufona pa0784 909 139 chiregai zvenyu ndakamuwana wandaitsvaga.
Ndiri murume ane makore 25 nemwana 1, ndinotsvagawo mukadzi kana musikana ane vana 2 ane makore 18 kusvika 24. Andifarira ndibate pa0777 851 435.
Makadii veKwayedza? Ini ndine makore 20 uye ndinotsvakawo mukomana ari pachokwadi anondida nemwoyo wose. Ndichiri mhandara izere, ndinoshanda mushopu uye ndinobva kwaZimuto kuMasvingo. Ndinoda akasununguka kutorwa ropa asi ngaave ane makore 21 – 26. Nhare yangu 0777 315 366.
Ini ndiri murume ane makore 31 ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ari pachokwadi chero ane mwana. Nhare yangu 0776 278 137.
Ndiri murume ane makore 38 nevana 4 ndinotsvaga mukadzi ane makore 40 kusvika 45 anoshanda. Anoda ndibate pa0775 012 256.
Ndiri mudzimai ane makore 24 ndinodawo murume ari pachokwadi uye akasununguka kutorwa ropa, anoshanda. Nhare yangu 0784 286 861.
Ndiri murume ane makore 33 nemwana 1 ndinodawo wanano nemudzimai ane mwana wakewo kana musikana ane makore 20 – 30. Ari HIV negative seniwo ngaandibate pa0774 268 140.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 27 nevana vatatu, HIV negative uye ndinoshanda muHarare. Ndinodawo mudzimai wokuroora ane makore 18 – 23, mutete akanaka uye anotya Mwari. Anoda imba andifarira anondibata pa0771 250 959.
Makadii? Ndiri murume ane makore 35, handina mwana uyezve ndinoita mabasa emawoko. Ndinotsvagawo mukadzi ane makore 30 zvichidzika, ini ndiri pamushonga asi hazviratidzike. Nhare yangu 0777 916 025 asi ngaave achigara muHarare kana pedyo.
Madini veKwayedza? Ini ndiri mudzimai ane makore 30 ndinotsvagawo murume wekushamwaridzana naye ane makore 32 kusvika 37 anoshanda. Ndine vana 2, andida ndibate pa0777 695 277.
Ndiri murume ane makore 37 nevana 2, ndinotsvagawo mukadzi ane mhuri yake ari pachokwadi asi asina chirwere. Ngaandibate pa0716 056 589.
Ini ndiri mukomana ane makore 21 ndinotsvakawo musikana akanaka ane makore 18 – 25. Vanoda ndibatei pa0733 389 580.
Ndiri murume ane makore 36 nevana vaviri, ndinodawo mukadzi ane mwana 1 ane makore 30 zvichidzika ari HIV negative. Nhare dzangu 0774 466 832.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 21, ndinotsvagawo musikana wezera rangu wekushamwaridzana naye ari pachokwadi kana ane mwana 1, anoenda kubasa. Anoda ngaandibate pa0773 922 816.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri murume ane makore 30. Ndinotsvagawo mukadzi ane makore 20-25 anofarira hupenyu hweparuzevha ane mwana mumwe. Ndinoda munhu asina chirwere nekuti tichaenda kunoongororwa ropa. Ngaave murefu zviri pakati nepakati, akasimba uye akanaka. Ndinoita basa rekurima bindu ndine water pump. Ndinogara kwaSeke, anondida fona pa0739 874 004.
Makadii? Ndiri murume ane makore 35 handina mwana uyezve ndinoita mabasa emawoko. Ndiri kutsvaga mukadzi ane makore 30 zvichidzika, ndiri pamushonga asi handiratidzike. Nhare yangu 0777 916 025, ngaave achigara muHarare kana pedyo.
Ndiri murume ane makore 37 nevana 2, ndinotsvagawo mukadzi ane mhuri yake ari pachokwadi. Asina chirwere ngaandibate pa0716 056 589.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 25 ndinotsvaka shamwarisikana yerudo. Andifarira nhare yangu 0714 618 754.